Hay’adda DRC oo maanta mootooyin nooca loo yaqaan Bajaaj ugu deeqday bara-kacayaasha kaamka Hala-bookhad. – Radio Daljir
Seteembar 5, 2012 5:06 b 0
Gaalkacyo, Sep 05-? Hay’adda Danish Reffugee Council (DRC) xafiiskeeda Gaalkacyo ayaa maanta bara-kacayaasha kaamka Hala-bookhad ee Gaalkacyo ugu deeqday 11 mooto oo nooca loo yaqaan Bajaajta, taasoo wax badan ka badalo doonto isu-socodka kaamka iyo magaalada ee dadka aan horay u haysan gaadiid ay ku shaqaystaan.
Munaasabadaas bara-kacayaasha la gudoonsiinayay mootooyinka waxaa ka qayb galay maamulka gobolka Mudug,kan degmada iyo saraakiil ka kala socday Hay’adaha DRC iyo UNHCR, waxaana munaasabadaasi ay ka dhacday dugsiga waxbarashada ee kaamka Hala-bookhad.
Gudoomiye ku xigeenka 1aad ee Mudud Farxaan Cali Xirsi oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa sheegay inay maanta 44 qoys ay ka baxeen qaxootinimada taasoo gudoomiyuhu uu ula jeedo inay heleen gaadiid ay ku shaqaystaan sidoo kalana ay ugu kala gooshayaan kaamkooda iyo magaalada oo ka baxsan deegaanka ay ku noolyihiin.
Duqa degmada Gaalkacyo Col; Siciid Cabdi Faarax ayaa isuguna bara-kacayaasha u ballan qaaday inay bilaha soo socda ka bixinayaan canshuuraha laga qaado gaadiidka taasna ay u samaynayaan si loo dhiiri galiyo fulitaanka barnaamijkan wax ku oolkaa ee ay wadaan Hay’adahan caalamigaa, Saraakiil ka tirsan Hay’adda ayaa sidoo kale halkaasi ka hadlay sheegayna gaadiidkan Bajaajtaa ay ka faa’iidaysan doonaan bara-kacayaasha reer Hala-bookhad.
Hay’adda DRC ayaa mashaariic fara badan ka fulisay gudaha magaalada Gaalkacyo, waxayna inta badan gacan muuqata ka gaysataa taageerada arimaha bulshada oo bara-kacayaasha ay ugu horeeyaan.